इलेक्ट्रीक गाडीमा भन्दा चार्जरमा भन्सार बढि छः निराकार श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता
7:04 am, शुक्रबार, जेठ ३, २०७६
विगत लामो समयदेखि अटोमोवाइल व्यासायमा रहेर यस क्षेत्रलाई नजिकबाट हेर्दै आएका लक्ष्मी इन्टर कन्टिनेन्टल्स प्रालिका कार्यकारी निर्देशक निराकार श्रेष्ठ यूवा व्यवसायीका रुपमा परिचित रहेका छन् । नाडा अटोमोवाइल एसोसियसन अफ नेपालको सदस्य र नाडा अटो शो कमिटिका संयोजक समेत रहेका श्रेष्ठले केही दिन अगाडि मात्रै गाडी उत्पादन गर्ने उद्योग दर्ता गरेर नेपालमा गाडी बनाउन कसिएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको परिप्रेक्षयमा अटो क्षेत्रले भोगेका चुनौति, इलेक्ट्रीक गाडीको संभावना, चार्जिङ स्टेशन, यस क्षेत्रको अवशर र नेपालमा गाडी उत्पादनको संभावना जस्ता विषयमा मेरोअटो डटकमका लागि उज्वल घिमिरे र सागर गजुरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
आर्थिक २०७६/७७ को बजेट आउन अब केही दिन मात्र बाँकी रहेको छ, यस्तोमा अटोमोबाइल सेक्टरलाई कसरी सम्बोधन होस् भन्ने व्यवसायीहरुले चाहेका छन् ?
अटोमोबाइल व्यवसाय आफैमा ठूलो भइसकेको छ । त्यस भित्रका हरेक क्षेत्रको आ–आफ्नै समस्या र चुनौति रहेका छन् । कतिपय अवस्थामा त्यो एक अर्कासँग बाजिएर पनि आउने गरेका छन् । त्यसमध्य म चार पाङ्ग्रे सवारीको क्षेत्रमा धेरै सक्रिय भएकाले यही क्षेत्रको बारेमा बोल्नु ठिक होला । गएको २/३ वर्षदेखि समग्र अटोमोबाइल क्षेत्र कठिन समयबाट गुज्रिएको छ । बिगत १०/१२ वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने पनि २ वर्ष राम्रो अनि अर्को २ वर्ष खराब रहँदै आएको थियो । तर, अहिलेको अवस्था फरक रहेको छ । बिगत ३ वर्षदेखि यो क्षेत्र लगातार चेपुवामा परेको छ । जसले सरकारको समग्र राजस्वमा करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, यही क्षेत्रलाई केही न केही बाहानामा चेप्ने काम भइरहेको छ । गत वर्षको बजेटमा सीसी अनुसार गाडीको अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरियो । चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन कुन विलासी र कुन आवस्यकता हो भन्ने कुराको निर्धारण मूल्यबाटै छुट्टिएको हुन्छ । त्यसलाई सीसी वा अन्य कुनै चिजमा लगेर जोड्न जरुरी छैन । सानै सीसीको गाडी पनि लक्जरी हुन सक्छ नी । हजार सीसीका गाडी सरकारले लग्जरी हुँदैन भन्ने सोचिरहेको छ । तर, हजार सीसी टर्बो इन्जिनमा आउने गाडी लग्जरी हुन सक्छ भन्ने कुरा नीति निर्माताले बुझनु पर्छ ।
सवारीसाधनमा खरिदकर्ताले अनिर्वाय ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट राख्नु पर्छ भन्ने व्यवस्थाले सबैभन्दा असर सरकारले आवस्यकताको बर्गमा राखेको गाडीमा भएको छ ।
नाडा भित्र सबैको आ–आफ्नो विचार र प्रडक्ट भएकाले यो कुरालाई संस्थागत रुपमा अगाडि लान सकेनौँ । यद्यपी हामीले गत वर्ष जसरी वर्गिकरण गरियो त्यो गलत हो र यसलाई मूल्यकै हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं । मूल्यसँग दाँजेर हेर्दा सजिलोसँग छुट्याउन सक्ने विषय भएकाले यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अर्को मुख्य विषय भन्सार दरमा हो । हामीले प्रत्येक वर्ष बजेटको सुझवमा संसारको सबैभन्दा महंगो दर भयो । यसलाई घटाउँ भनिरहेका छौ । त्यसबाट सरकारको राजस्व घट्नु पनि भएन र यसलाई अन्य देशको तुलनामा अत्याधिक पनि बनाउन भएन भन्ने हाम्रो माग हो । विश्व व्यापार संगठनको परिधिमा रहेर काम गरौ भन्दै आएका छौं । त्यसकारण भन्सारदर क्रमिकरुपमा घटाउदै लानुपर्छ भन्ने हो । हामीले नाडाबाट भन्सार दर यो–प्रडक्टमा यस्तो हुनुपर्छ भनेर लिस्ट नै बनाएर दिएका छाैँ ।
सवारीसाधनमा खरिदकर्ताले अनिर्वाय ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट राख्नु पर्छ भन्ने व्यवस्थाले सबैभन्दा असर सरकारले आवस्यकताको बर्गमा राखेको गाडीमा भएको छ । सरकारले आवस्यकताको सूचीमा राखेको गाडीको बिक्री बढाउने र विलासी गाडीको बिक्री घटाउने भनेर ५० प्रतिशत अनिर्वाय डाउन पेमेन्टको व्यवस्था गर्यो । तर, यसको उल्टो असर परिरहेको छ । साना २०/२२ लाखको गाडी किन्ने मानिसले १०/११ लाख जुटाउन सकिरहेका छैनन् । तर, १ करोड भन्दा माथिका गाडी लिनेको फाइनान्सीयल अवस्थापनि बलियो हुने र उसले धेरै जस्तो कम्पनीबाट गाडी किन्ने हुँदा उसमा न्यून असर परिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बिक्रीलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
गाडी बिक्रेता कम्पनीले आफ्नो बिक्रीको हिसाव किताव अंग्रेजी मिति अनुसार राख्ने गर्छन् । भर्रखरै आर्थिक वर्ष सकिएको छ । यसलाई मैले केलाएर त हेरेको छैन । तर, हाम्रो सवालमा जस्तो ग्रोथ छ त्यो इलेक्ट्रीक भेहिकलले मात्र दिएको छ । साथै स्यान्ट्रोले नम्बरमा केही सुधार गरेको छ । अन्य सेगमेन्टमा वृद्धि होइन घटेको छ । गत वर्षको बिक्रीलाई हेर्ने हो भने इन्डस्ट्रीको मार्केट सेयर कम्पोजीसनमा धेरै परिवर्तन भएको छ । केही कम्पनी पहिलेको तुलनामा अगाडि बढेका छन् भने कोही एकदमै पछि परेको अवस्था छ ।
विद्युतीय सवारीलाई व्यवस्थीत र बढवा दिने विषयमा सरकार लचिलो छ भनिन्छ ग्राहकले गाडी किन्न पनि थालेका छन् । अब चुनौँति चार्जिङ स्टेशनमा देखिन्छ । अबको बजेटले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ?
अहिले इलेक्ट्रीक गाडीमा भन्दा चार्जरमा भन्सार बढी लाग्ने गरेको छ । त्यसको वर्गिकरण प्रस्ट छैन । वर्गिकरण प्रस्ट नहुँदा भन्सारमा जुन कोडमा गाडी आउछ चार्जरलाई अन्य शिर्षकमा राखेर ल्याउनु परिरहेको छ । त्यसैले त्यसको हार्मोनाइज कोड अपडेट गर्नु पर्र्यो । र त्यसता चार्जिङ स्टेशनका सामान जिरो भन्सारमा ल्याउनु पर्र्यो ।
कसरी चार्जिङ स्टेशन बनाउने भन्ने विषयमा हामीले बिद्युत प्रधिकरण र एडीबीसँग कुरा गरिरहेका छौैँ । एनईएले ले ५० वटा चार्जिङ स्टेशन बनाउने भनेर घोषणा गरेको छ । नीति निर्मातामा हामीले विद्युतीय गाडी बेच्छौँ भने चार्जिङ स्टेसन पनि हामीले लगाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा रहेको छ तर, त्यो सहि हो जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यो विषय छुट्टै विजनेस मोडल हो ।
यदी वातावरणको क्षेत्रमा आउने लगानीको केही रकम यस्ता चार्जिङ पूर्वाधार बनाउन लगाउने हो भने अप्रेसन धान्न सक्छ ।
हामीले बिभिन्न समयमा बिज्ञहरुसँग नेपालमा कसरी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिहेका छौँ । केही समय अगाडि सिंगापुरमा ‘एसिया इलेक्ट्रीक भेकल चार्जिङ इन्फास्ट्रक्चर समिट’ भएको थियो । उक्त समिटले निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रको सहकार्यमा यस्ता चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न सकिने कुरा बाहिर ल्याएको छ । सरकारले जग्गा, विद्युतको मूल्यमा अनुदान र करमा छुट दिनु पर्ने कुरा आएको थियो ।
इभी सधैँ वातावरणसँग जोडिएर आउने भएकाले वातावरणको क्षेत्रमा आउने लगानीलाई यसमा प्रयोग गर्नु पर्ने विषय समिटमा बिज्ञहरुले राखेका थिए । निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेशन बनाएर लगानीको प्रतिफल पाउनै सक्दैन । यदी वातावरणको क्षेत्रमा आउने लगानीको केही रकम यस्ता चार्जिङ पूर्वाधार बनाउन लगाउने हो भने अप्रेसन धान्न सक्छ ।
पब्लिक चार्जिङ स्टेसन भन्ना साथ ७ किलोवाटको चार्जर राखेर हुँदैन, डीसी फास्ट चार्जर राख्नै पर्छ । जसको मूल्य २५ हजार डलरदेखि ८० हजार डलरसम्म रहेको छ । अहिले इभी चार्जर चीन र यूरोपेली देशले बनाइरहेका छन् । त्यसैले चार्जरको मूल्य र समयमा एकरुपता ल्याउन बीच रेन्जका चार्जर बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको हामीले बुझेका छौ । अहिलेको समस्या भनेको कति समयमा तपाईको कार चार्ज हुन्छ भन्ने विषय हो । यो विषयले चार्जिङ स्टेशनमा गाडी चार्ज गरेको शुल्क कति पर्छ भन्ने कुरालेपनि महत्व राख्छ ।
ग्राहकले आफ्नो आवस्यकताभन्दा बढी रेन्जका गाडी खोजी रहेका छन् ।
चार्जिङ स्टेसनका लागि विद्युत महशुलमा अनुदान, चार्जरको भन्सार घटाउने, सरकारले जग्गा दिने र वातावरण क्षेत्रमा आउने लगानीसँग यसलाई जोड्न सक्यो भने चार्जिङ स्टेशन बनाउन गाह्रो छैन ।
विद्युतीय गाडीमा अझैपनि उपभोक्ताले किन विस्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ?
मासरुपमा इलेक्ट्रीक गाडीको प्रयोग सुरु हुनु अघि नै चार्जिङ स्टेशन नभई इभीको काम छैन जस्तो बनाइयो । लामो यात्रामा आफ्नै गाडी लिएर १० प्रतिशत मानिस पनि जाँदैनन् । तर सबैमा एउटै डर छ, म लामो ठाउँमा जाँदा आफ्नो गाडी लिएर जान पाउदिन कि भन्ने । त्यसैले ग्राहकले आफ्नो आवस्यकताभन्दा बढी रेन्जका गाडी खोजी रहेका छन् । यहाँ बुझनु पर्ने कुरा के छ भने इभीमा रेन्ज बढ्नु भनेको गाडीको साइज बढ्नु हो । त्यो भनेको ब्याट्रीको साइज नै बढ्ने हो । त्यसले गाडीको पफमेन्समा फरक ल्याउँछ । यदि ४० किलोवाटको र ६४ किलोवाटको ब्याट्री भएको गाडी छ भने ४० किलोवाटको व्याट्री चार्ज गर्ने खर्च कम आउँछ । तर, मानिसहरु ठूलो ब्याट्री भएको गाडी चाहियो भन्छन् ।
गाडी परिवर्तन गर्ने बेलामा आफ्नो गाडीको ब्याट्रीको यूजेबल लाइफ कति छ, बेच्दा रिसेल भ्यालु के हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै सोची रहेको हुन्छ ।
अहिलेसम्म ब्याट्रीको लाइफ कति हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छैन । हामीले ८ वर्षको वारेन्टी दिइरहेका छौँ तर, ११/१२ वर्षसम्म यो व्याट्रीले राम्रोसँग काम गर्छ । ब्याट्रीको रिप्लेसमेन्ट कस्टमा कन्फुयूजन छ । उसले गाडी परिवर्तन गर्ने बेलामा आफ्नो गाडीको ब्याट्रीको यूजेबल लाइफ कति छ, बेच्दा रिसेल भ्यालु के हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै सोची रहेको हुन्छ ।
गाडी एसेम्बलिङको कुरा चर्चामा छ । तपाईले पनि गाडी बनाउन नयाँ उद्योग दर्ता गराउनु भएको छ । बजेटबाट के अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
अहिले नीति निर्मातालाई बुझाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ । नेपालमा गाडी उद्योगको प्रस्ट प्रावधान छैन । नेपालमै गाडी बन्ने भनेको सानो कुरा हैन । एसेम्बलिङ भनेको नै गाडी उत्पादनको प्रस्थान बिन्दु हो । नेपालको अहिलेको नीतिले १० प्रतिशत भ्यालु एडिसन भनेको छ । त्यसपछि क्रमिकरुपमा ५ वर्षमा लोकल कम्पोनेन्ट १० प्रतिशत र भ्यालु एडिसन ३० प्रतिशत पुराउनु पर्छ भनिएको छ । एसेम्बलिङ कम्पीलिट नक डाउन किट र सेमी नक डाउन किटको रुपमा ल्याएर गरिन्छ । यी दुईमा हुने लगानीमा धेरै ठूलो फरक हुन्छ । त्यसैले अहिले यही बिषयमा बुझाउन जरुरी छ ।
त्यसैले हामीले नाडाबाट नक डाउन किटमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्छ भनेका छाैँ । त्यसको साथै हामीले जग्गा, बाटो र बिजुली जस्ता विषयमा सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ । यदि यस्तो हुन सकेको खन्डमा ५ वर्षपछि ३० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्न सक्नेगरी कम्पनी खुल्ने छन् ।